Hadda waxaad wax ka beddeli kartaa cabbirka wijiyadaha ku jira Google Clock | Androidsis
[APK] Abka Google Clock wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad wax ka beddesho cabbirka wijiyadahiisa iyo waxyaabo kale oo badan
Isbuucaan waxaan u helnay casriyeyn xiiso leh Khariidadaha, mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan Google. Nooc cusub oo xiiso leh oo la yimid mid ka mid ah kuwaas faahfaahin yar oo si weyn u xoojiya waayo-aragnimada isticmaale ee laga heli karo. Kani waa kartida lagu joojiyo jihooyinka kolba kolba marka aan wicitaan ku jirno. Muhiimad yar oo haddii aadan haysan, khalkhalka lagu rakibi karo inta udhaxeysa codka wicitaanka soo socda iyo midba markiisa ka dambeeya wuxuu ka dhigi karaa baabuurkeenu inuu u ekaado sidii Mr. Bean sketch. Waxay ku jirtaa faahfaahintaan yar yar ee Google sida caadiga ah u helo caqli gal ah cusbooneysiin badan, sida nooc cusub oo ah barnaamij sida Clock ah, oo u shaqeeya sida soo jiidashada shaqadeeda aasaasiga ah.
Nooca cusub ee Google Clock wuxuu helaa sheeko cusub oo noo ogolaaneysa dib u habeyn qalabkaaga. Marka laga reebo sheekadan cusub ee saacaddu ina keento, waxaad ku kalsoonaan kartaa kuwa kale oo aad ugu heellan dhinaca muuqaalka sida animations cusub iyo digniino maqal ah oo ku jira Android Wear. Cusboonaysiin cusub oo weyn oo timaadda bilaha barnaamijkan markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay, si hufanna ah dhammaadkii Sebtember ee sannadkii hore markii ay heshay xoogaa muhiim ah oo ku saabsan isdhaafsiga isticmaalaha. Saacaddu waxay ku filan tahay inay noqoto barnaamijkaaga caadiga ah ee ku shaqeeya Android-kaaga haddii aan hadda ku darno ikhtiyaarkaas si aan u cabbirno qalabka loo yaqaan 'widget' si ay ugu fadhiisato shaashadda oo dhan, haddii aan jeclaan lahayn, si ka fiican sidii hore.
1 Wgetget-yada si buuxda wax looga beddeli karo
2 Animations cusub
3 Digniinta maqalka ee ku saabsan Android Wear
Wgetget-yada si buuxda wax looga beddeli karo
Haysashada barnaamij noocan oo kale ah oo wata aalado dhowr ah iyo in aanan awoodin inaan wax ka beddelno cabirka dhab ahaantii waa guul darro weyn. Qaar badan oo naga mid ahi waxay jecel yihiin inay saacaddu ku yeeshaan baaxad weyn si aan u awoodno dhaqso u ogow waqtiga halkii aad ka eegi lahayd barta xaaladda. Sababtaas awgeed, barnaamijkan saacadda leh ee xiisaha lihi wuxuu qaadanayaa sheeko cusub oo la codsaday muddo dheer markaan haysannay suurtagalnimada inaan ku soo degsanno markii ugu horreysay Google Play Store.
Widgets-yada kumbuyuutarka ayaa la cusbooneysiiyay si markaa gebi ahaanba loo cabbiri karo. Noocii hore waxaa kujiray widget saacad analog ah oo ku xirnaa a 2 x 2 cabbir la'aan ikhtiyaar la'aan in la beddelo cabbirka iyo nooca dijitaalka ah in kasta oo cabbirkiisa wax laga beddeli karo, haddana aan si fiican ugu habboonayn ballaca iyo dhererka. Hadda, saacadda analogga waxaa lagu cabbiri karaa cabbirka buuxa ee soo-saaraha oo midka dijitaalka ah wuxuu ku habboon yahay si dhammaystiran dhib la'aan.
Naqshadeynta Maaddada ayaa na keenta animations cusub iyo kuwa midabada flat iyada oo saldhig u ah luuqada naqshadeynta ee lagu arkay barnaamijyo badan iyo Android lafteeda. Google Clock waxaan hada ku haynaa animations cusub oo micnaheedu yahay inaan helno horumar ah tayada muuqaalka marka aan dhaqaajino cabirrada sida ay ugu muuqdaan GIF-ga firfircoon.
Tallaabo kasta oo la qaado alaarmiga ayaa kiciya animations-kaas inaad ku aragto GIF. Qaar ka mid ah faahfaahinta muuqaalka ah ee la tixgelinayo taasna waxay hagaajineysaa tayada dalabka si ay ula socoto dad kale oo badan oo ka socda Google oo fiiro gaar ah u leh muuqaalkan muuqaalka ku jira.
Digniinta maqalka ee ku saabsan Android Wear
Hadda alaarmiga saacadda ku saleysan ee hoosta ku qoran Android Wear ayaa loo dejin karaa awood u yeelo ama joojiso codka digniinta iyo gariirka, sidaa darteed isticmaalayaashu waxay ikhtiyaar u leeyihiin markay toosaan inay maalinta bilaabaan. Fursadahaan ayaa soo muuqan doona haddii barnaamijka lagu rakibo taleefanka casriga ee la socda afhayeenka iyo haddii la cusbooneysiiyey Android 6.0 Marshmallow.
Marka la soo koobo, taxane cusub oo sheeko-xariir ah a Barnaamijka saacadda oo si weyn u shaqeeya taasina waxay na hor dhigaysaa aasaasiga maanta ee dalabka noocan ah. Saacaddu ma sii socoto oo waxay la socotaa astaamaha barnaamijyo kale oo badan oo Google ka mid ah sida Keep, oo raadineysa ugu yaraan qaabeynta iyo xulashooyin gaar ah oo u fududeynaya adeegsadaha inuusan "waalan" tegin marka uu leeyahay dhammaan noocyada xuduudaha daaqadaha ama menus.
Soo degso APK-ka Google Clock
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » [APK] Abka Google Clock wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad wax ka beddesho cabbirka wijiyadahiisa iyo waxyaabo kale oo badan